Ihowuliseyili 10T Umzi-mveliso womatshini womkhenkce weTube kunye nababoneleli |Herbin Ice Systems
Block umatshini ice
Umatshini womkhenkce we-3T
10T Umatshini womkhenkce weTube
5T ityhubhu umatshini ice
Umatshini womkhenkce we-5T
Amandla okuqhuba: 31.25 KW.
Ubushushu bomkhenkce: Minus 5℃.
Umgangatho womkhenkce: Ubala kunye nekristale.
Idayamitha yomkhenkce: 22mm, 29mm, 35mm okanye enye.
Isibandisi: R404a, R448a, R449a, okanye ngenye indlela.
Ubonelelo lwamandla: Isigaba esi-3 sobonelelo lwamandla kushishino.
Umthamo wemveliso wemihla ngemihla womkhenkce: 10,000 kgs zeityhubhu zomkhenkce ngeeyure ezingama-24.
Imeko yokusebenza esemgangathweni: 30℃ ambient kunye ne-20℃ ubushushu bamanzi.
Ukusetyenziswa kwamandla: I-75 KWH yombane ukwenza yonke itoni ye-ice flakes.
Ividiyo yokuvavanya i-10T / imini yomatshini womkhenkce womkhenkce kumzi-mveliso wam.
Umkhenkce wetyhubhu luhlobo lomkhenkce onomngxuma wecylindrical onedayamitha yangaphandle ø22, ​​ø29、ø35mm kunye nobude obungama-25～42mm.Idayamitha yomngxuma idla ngokuba yi-ø0～5mm kwaye inokulungiswa ngokwexesha lokwenza umkhenkce.
Iimpawu: Umkhenkce wetyhubhu ungqindilili kwaye uyabonakala kunye nexesha elide lokugcina.Ayinakwenzeka ukuba inyibilike ngexesha elifutshane.Umkhenkce wombhobho mhle kakhulu, kwaye unokuba 100% obala, ikristale.Kubonakala kumnandi kakhulu kwisiselo, isiselo.
Isicelo: Ukutya kwemihla ngemihla, ukupholisa isiselo, isiselo, ukugcina imifuno kunye nokutya kwaselwandle kutsha, njl.
Imifanekiso ye-10T / imini yomatshini womkhenkce we-tube esiyenzile ngaphambili.
Nazi iingenelo eziphambili zoomatshini bam bomkhenkce beTube.
1.Ikopi yeyona nto ingcono kwaye ingcono kuneyona nto ingcono.
Ngokwahlukileyo kwezinye iifektri zoomatshini bomkhenkce, iinkqubo zeHerbin Ice zancama itekhnoloji yaseTshayina ehluphekayo yetyhubhu ngonyaka ka-2009.
Ngophando oluthe chu kunye noluqhubekayo kunye nophuhliso, ngoku sinokwenza oomatshini bomkhenkce ityhubhu ngowona msebenzi ubalaseleyo wokusebenza.Oomatshini bomkhenkce beTube bazinzile kwaye banexesha elide kakhulu lenkonzo.Oomatshini bayasebenza kwaye bawonga kakhulu amandla.Iityhubhu zomkhenkce ezenziwe ngoomatshini ziyabonakala, ziyikristale kwaye zintle.
Oomatshini bobona buchwepheshe bomkhenkce betyhubhu bokugqibela.Ii-evaporators zixhotyiswe ngenzwa yenqanaba lolwelo, ezigcina umgangatho wolwelo ufanelekile.Yenza inkqubo yobushushu ephuphumayo phantsi kolawulo kakuhle kakhulu.Okwangoku, songeza i-receiver engamanzi ngaphezulu kwe-evaporator, ii-2 zokutshintsha ubushushu kwiindawo ezifunekayo, unikezelo lwe-smart liquid, njalo njalo.
Icompressor iya kuhlala isebenza ngeyona meko ilungileyo ngelixa ezinye iicompressor zoomatshini bomkhenkce baseTshayina zonakaliswa ngokulula ngexesha lokuqhaqha.
Enkosi kubuchwephesha bethu obuphezulu kunye noyilo lwenkqubo ekrelekrele, sinokusebenzisa icompressor encinci ukufikelela kumthamo womkhenkce ofanayo.Oko kuthelekiswa nabanye oomatshini bomkhenkce baseTshayina.Ngecompressor encinci, oomatshini bethu bomkhenkce ityhubhu basebenzisa umbane omncinci ukwenza umlinganiselo ofanayo womkhenkce.
Masibale kunye ne-10T / imini yomatshini womkhenkce wetyhubhu.
Abanye oomatshini bomkhenkce baseTshayina abapholisa amanzi batya i-105KWH yombane ukwenza yonke itoni yomkhenkce.
Oomatshini bam bomkhenkce betyhubhu basebenzisa kuphela i-75KWH yombane ukwenza yonke itoni yomkhenkce.
Umahluko wokwenza itoni nganye yeityhubhu zomkhenkce ngama-30KWH ombane.
Ke yonke imihla, umahluko wokusetyenziswa kombane ngu-30x10=300KWH.
(105-75) x 10 x 365 x 10 =1,095,000 KWH, lowo ngumahluko wokusetyenziswa kombane kwiminyaka eyi-10.
Ukuba abathengi bakhetha umatshini wam we-ice 10T / ngosuku, baya kugcina i-1,095,000 KWH yombane kwiminyaka eyi-10.
Ukuba umthengi ukhetha obunye ubuchwephesha obungalunganga bomatshini womkhenkce, uya kuchitha imali ethe kratya ukuhlawula loo setyenziso lombane olungenantsingiselo, i-1,095,000 KWH.
Yimalini nge-1,095,000 KWH yombane kwilizwe lakho?
I-1,095,000 KWH yombane imalunga ne-US$ 150,000 e-China.
3.Umgangatho olungileyo kunye newaranti ende.
I-80% yamacandelo kumatshini wam we-ice ityhubhu ziimpawu ezidumileyo zamazwe ngamazwe.Afana ne-Bitzer, i-GEA Bock, i-Danfoss, i-Schneider, njalo njalo.
Iqela lethu lobuchwephesha kunye namava okuvelisa lisebenzisa ngokupheleleyo izinto ezilungileyo.
Oko kukuqinisekisa ukuba usemgangathweni ophezulu koomatshini bomkhenkce ityhubhu enomsebenzi olungileyo wokusebenza.
Iwaranti yenkqubo yefriji yiminyaka engama-20.Ukuba ukusebenza kwenkqubo yesikhenkcisi kuyatshintsha kuze kube kungaqhelekanga kwiminyaka engama-20, siya kuyihlawula.
4.Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
Asifuni ngaphezu kweentsuku ezingama-20 ukwenza enye okanye eziliqela 3T/day, 5T/day, 10T/day machine ityhubhu ice.
Asifuni ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 ukwenza enye okanye eziliqela 20T/day, 30T/mini koomatshini ityhubhu yomkhenkce.
Umthengi akayi kulinda ixesha elide ukuze afumane oomatshini bomkhenkce ityhubhu emva kokuhlawula.
Ngaphambili: 5T ityhubhu umatshini ice
Okulandelayo: 20T umatshini womkhenkce ityhubhu
20T umatshini womkhenkce ityhubhu
3T umatshini womkhenkce ityhubhu